प्रवक्ता डा. देवकोटाले भने : "बिरामी फर्काउने अस्पताललाइ कारबाही हुन्छ" Demo Khabar: Voice for freedom,fight and Right
'सबै अस्पतालले आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ’
काठमाडौं, चैत । सरकारले ज्वरो आएका बिरामीको उपचारै नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कतिपय अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा उपचारै नगरी फर्काइदिने गरेकोमा सरकारले यस्तो पाइए कारबाही गर्ने बताएको हो ।
सरकारले तोकेका कोरोना विशेष अस्पतालहरु, हब अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा ज्वरो क्लिनिक र आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने डा. देवकोटाले बताए ।
त्यसबाहेक अन्य अस्पतालले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा यथारुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘कुनैपनि अस्पतालले आकस्मिक सेवा लिन आएका बिरामीलाई अब फर्काउनुहुने छैन भन्ने विश्वास गरेका छौं’ देवकोटाले भने ।
दुई जनाको काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, एक जनाको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल र एक जनाको बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । डा. देवकोटाले सबै संक्रमितको स्वास्थ्यमा जटिलता नआएको बताए ।
नेपालमा कोरोना : "थप ३६ मा संक्रमण संक्रमित ५८४ पुगे"
नेपालमा कोरोना : "थप ९ मा संक्रमण पुष्टि, संक्रमित ५१६ पुगे"